23 Pọl legidere Sanhedrin anya, sị: “Ụmụnna m, eji m ezi akọ na uche zuru okè+ na-ebi ndụ n’ihu Chineke ruo taa.”
2 Ananayas bụ́ nnukwu onye nchụàjà wee nye ndị guzo ya nso iwu ka ha tie+ ya ihe n’ọnụ.
3 Pọl wee sị ya: “Chineke ga-eti gị ihe, gị mgbidi e tere nzụ.+ Ị̀ nọ ọdụ na-ekpe m ikpe dị ka Iwu+ ahụ si dị ma n’otu mgbe ahụ na-emebi Iwu+ ahụ, na-enye iwu ka e tie m ihe?”
4 Ndị guzo ya n’akụkụ sịrị: “Ị̀ na-ekwujọ nnukwu onye nchụàjà nke Chineke?”
5 Pọl wee sị: “Ụmụnna m, amaghị m na ọ bụ nnukwu onye nchụàjà. N’ihi na e dere, sị, ‘Ekwula okwu ọjọọ banyere onye na-achị ndị gị.’”+
6 Ma mgbe Pọl matara na otu akụkụ bụ ndị Sadusii,+ akụkụ nke ọzọ abụrụ ndị Farisii, o tiri mkpu n’ime Sanhedrin, sị: “Ụmụnna m, abụ m onye Farisii,+ nwa onye Farisii. Ọ bụ n’ihi olileanya mbilite n’ọnwụ+ nke ndị nwụrụ anwụ ka a na-ekpe m ikpe.”+
7 N’ihi ihe a o kwuru, esemokwu+ bilitere n’etiti ndị Farisii na ndị Sadusii, ìgwè mmadụ ahụ kewakwara abụọ.
8 N’ihi na ndị Sadusii+ na-ekwu na e nweghị mbilite n’ọnwụ+ ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ mmụọ, ma ndị Farisii na-ekwusa ihe a niile n’ihu ọha.
9 Ya mere, oké iti mkpu dara,+ ụfọdụ ndị odeakwụkwọ nọ n’òtù ndị Farisii bilikwara wee malite ịrụsi ụka ike, sị: “Anyị ahụghị ihe ọjọọ ọ bụla nwoke a mere;+ kama ọ bụrụ na mmụọ ma ọ bụ mmụọ ozi gwara ya okwu,+—.”
10 Ma mgbe esemokwu ahụ karịwara, ọchịagha ahụ tụrụ egwu na ha ga-adọrisị Pọl, o wee nye ìgwè ndị agha iwu+ ka ha gbadaa wee dọpụta ya n’etiti ha ma kpọbata ya n’ogige ndị agha.+
11 Ma n’abalị ụbọchị ahụ, Onyenwe anyị guzoro n’akụkụ ya,+ sị ya: “Nwee obi ike!+ N’ihi na dị ka ị nọworo na-agba àmà nke ọma+ n’ihe banyere m na Jeruselem, otú ahụkwa ka ị na-aghaghị ịgba àmà na Rom.”+
12 Ma mgbe chi bọrọ, ndị Juu gbara izu ọjọọ,+ ṅụọkwa iyi,+ kwuo na ha agaghị eri ihe ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ ruo mgbe ha gburu Pọl.+
13 E nwere ihe karịrị ndị ikom iri anọ ji ịṅụ iyi gbaa izu ọjọọ a;
14 ha wee gakwuru ndị isi+ nchụàjà na ndị okenye, sị: “Anyị aṅụwo iyi na anyị agaghị edetụ nri ọnụ ruo mgbe anyị gburu Pọl.
15 Ya mere, ugbu a, ka unu na Sanhedrin mee ka o doo ọchịagha ahụ anya ihe mere ọ ga-eji kpọdatara ya unu dị ka à ga-asị na unu bu n’uche ịchọpụta okwu ndị metụtara ya n’ụzọ ziri ezi karị.+ Ma tupu o rute nso, anyị ga-adị njikere igbu ya.”+
16 Otú ọ dị, nwa nwanne nwaanyị Pọl nụrụ na ha chechiri ya,+ o wee bịa ma banye n’ogige ndị agha ma kọọrọ ya Pọl.
17 Ya mere, Pọl kpọrọ otu n’ime ndị isi ndị agha wee sị ya: “Duru nwa okorobịa a gakwuru ọchịagha, n’ihi na o nwere ihe ọ ga-akọrọ ya.”
18 Ya mere, nwoke a kpọọrọ ya ma duru ya gakwuru ọchịagha ahụ wee sị: “Onye mkpọrọ ahụ bụ́ Pọl kpọrọ m ma gwa m ka m dutere gị nwa okorobịa a, n’ihi na o nwere ihe ọ ga-agwa gị.”
19 Ọchịagha ahụ seere ya n’aka+ pụọ ma malite ịjụ ya na nzuzo, sị: “Gịnị ka ị chọrọ ịkọrọ m?”
20 O wee sị: “Ndị Juu ekwekọrịtawo ịrịọ gị ka ị kpọdata Pọl n’ihu Sanhedrin echi dị ka à ga-asị na ha chọrọ ka e lebakwuo anya nke ọma n’okwu ya.+
21 Nke ka nke, ekwela ka ha mee ka i kwere, n’ihi na ihe karịrị ndị ikom iri anọ n’ime ha na-echechi ya,+ ha ejiriwokwa ịṅụ iyi jikọta onwe ha na ha agaghị eri ihe ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ ruo mgbe ha gburu ya;+ ha dịkwa njikere ugbu a, na-echere ka i kwe ha nkwa.”
22 Ya mere, ọchịagha ahụ hapụrụ nwa okorobịa ahụ ka ọ gawa mgbe o nyesịrị ya iwu, sị: “Akọrọla onye ọ bụla na i mere ka m mata ihe ndị a.”
23 O wee kpọọ mmadụ abụọ n’ime ndị isi ndị agha ahụ wee sị ha: “Kwadebenụ narị ndị agha abụọ ka ha zọrọ ije gaa Sesaria, tinyere iri mmadụ asaa ndị na-agba ịnyịnya na narị ndị agha abụọ ji ube, n’awa nke atọ n’abalị.*
24 Wetakwa ịnyịnya ibu ndị ga-ebu Pọl bugara Filiks bụ́ gọvanọ n’enweghị ihe ọ bụla mere ya.”
25 O wee dee akwụkwọ ozi dị otú a:
26 “Klọdiọs Laịsias, na-edetara onye ukwu, bụ́ Gọvanọ Filiks,+ akwụkwọ: Ana m ekele gị!
27 Ndị Juu jidere nwoke a, ọ fọkwara nke nta ka ha gbuo ya, ma akpọ m ìgwè ndị agha bịa na mberede wee napụta ya,+ n’ihi na m nụrụ na ọ bụ onye Rom.+
28 Ebe ọ bụ na m chọrọ ịchọpụta ihe mere ha ji na-ebo ya ebubo, akpọdatara m ya n’ime Sanhedrin ha.+
29 Achọpụtara m na e boro ya ebubo banyere okwu ndị metụtara Iwu ha,+ ma ọ dịghị otu ihe nke kwesịrị ọnwụ ma ọ bụ agbụ nke e boro ya ebubo ya.+
30 Ma ebe e mere ka m mara nkata+ a kpaara nwoke a, m na-ezitere gị ya ozugbo, m na-enyekwa ndị na-ebo ya ebubo iwu ka ha kwuo okwu megide ya n’ihu gị.”+
31 Ya mere, ndị agha+ a kpọọrọ Pọl dị ka iwu e nyere ha si dị wee gaa Antipatris n’abalị.
32 N’echi ya, ha nyere ndị na-agba ịnyịnya ikike ka ha na ya soro gaa, ha laghachikwara n’ogige ndị agha.
33 Ndị ahụ na-agba ịnyịnya banyere na Sesaria+ ma nye gọvanọ akwụkwọ ozi ahụ, nyefeekwa Pọl n’aka ya.
34 Ya mere, ọ gụrụ ya wee jụọ ógbè o si, o wee chọpụta+ na o si Silishia.+
35 “M ga-atọ ntị n’ala nụrụ ihe i nwere ikwu,” ka o kwuru, “mgbe ndị na-ebo gị ebubo bịarutekwara.”+ O wee nye iwu ka a na-eche ya nche n’ebe obibi ndị ọchịchị dị n’obí Herọd.
^ Ọrụ 23:23*
Ihe dị ka n’elekere itoolu nke abalị.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D44%26Chapter%3D23%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl